Takamirira kupera kweCovid-19: ZSA | Kwayedza
18 Feb, 2021 - 11:02 2021-02-18T11:40:26+00:00 2021-02-18T11:40:26+00:00 0 Views
SANGANO reZimbabwe Softball Association (ZSA) rinoti pari zvino harina pfungwa dzekudzora mutambo uyu nedonzvo rekuchengetedza vatambi kubva kunjodzi yekutapurirwa chirwere cheCovid-19.
Muhurukuro neKwayedza, mutungamiriri weZSA —Stonard Mapfumo — anoti sangano ravo riri kukoshesa kutevedzera mitemo yakaiswa neHurumende yekuti vanhu vasaungane senzira yekurwisa kupararira kwechirwere ichi.
“Isu seZSA tiri kukoshesa zvikuru mitemo yakaiswa neHurumende yeCovid-19 nekuti hatisi kuda kuti mangwana tizosare nemutoro mukuru kana vatambi vedu vazhinji vabatira denda iri.
“Hatisi kuda zvinozotinetsa saka chinhu chikuru panguva ino ndechekuti vanhu vange vakachengetedzeka vasabatire Covid-19,” anodaro.
Chero zvazvo achiti vari kumbomira kuronga mitambo yesoftball, Mapfumo anoti zvikwata zvavo zvinofanirwa kugara zvakarongeka kuitira panozonzi mitambo ngaichitange kutambwa.
“Iye zvino tiri kukurudzira zvikwata zvedu kuti ngazvigare zvakarongeka, zvione kuti mabhuku azvo ari mugwara chairo uye vachitsvaga vakotsveri nemari dzekuti vazoendesa vatambi vavo kunovhenekwa kuti havana here Covid-19.
“Ndiyo nguva yacho yekuzvigadzirisa nekuti hatizodi kuti pamberi apo kana tapihwa mvumo yekuti tichitanga kuronga mitambo nekukwikwidza, vanhu vochitanga kumhanya-mhanya ipapo kugadzirisa mabhuku avo.
Mabhuku ngaagare ari mugwara nekuti isu hatina kuvhara mahofisi,” anodaro Mapfumo.